Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Spain iyo Sacuudi Carabiya waxay u arkaan waddo loo maro UNWTO
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wicitaankii ugu horreeyay wuxuu dhex maray Dhaxal -sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Ra’iisul Wasaaraha Spain.
Wicitaanka labaad wuxuu la socday Xoghayaha Guud ee UNWTO.
Wicitaankii saddexaad ee dhex maray Wasiirka Dalxiiska ee Isbaanishka iyo Sucuudiga ayaa maanta keenay in MOU lagu saxiixo Riyadh bishaan si loo shaabadeeyo mustaqbalka UNWTO.
Ujeedka Dowladda Sacuudi Carabiya ay u riixeyso fodib u dejinta Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO)) laga bilaabo Madrid ilaa Riyadh ayaa la hakiyay horaantii toddobaadkan.
Ra'iisul Wasaaraha Spain, Dhaxal Sugaha Sacuudiga, iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa ku lug yeeshay ka hortagga codsi rasmi ah.
Maanta Mudane Ahmed Al Khateeb wasiirka of Dalxiiska of Sacuudi Carabiyaa waxay wadahadal la yeesheen Wasiirka Dalxiiska ee Spain, HE Reyes Maroto.
Sida laga soo xigtay ilo -wareedyo eTN, kulanka tooska ah ee dhex maray labada wasiir dalxiiska ee Sucuudiga iyo Spain Jimcihii ayaa si wanaagsan u dhacay.
Mowqifka Sacuudi Carabiya wuxuu had iyo jeer ahaa UNWTO inay ka ciyaarto door muuqda oo wax ku ool ah si ay u taageerto dalalka soo koraya. Sacuudi Carabiya ayaa dabada ka riixaysa taageero dheeraad ah UNWTO Spain, oo ah dalka ay martigaliso hay'adda UN-ka ku xiran.
Ilo -wareedyada eTN ayaa sidoo kale ku wargeliyay inay jiri doonaan bayaan wadajir ah oo ay u badan tahay horaanta toddobaadka soo socda, iyadoo laga yaabo in wasiirka Spain uu u safro Riyadh si uu u saxiixo MOU bishan.
Tallaabadan ayaa ah mid muhiim ah waxaana kaliya loo arki karaa inay tahay guul dadaallada wasiirka Sacuudi Carabiya, oo lagu arkay isagoo ku safraya adduunka, ka qeybgalaya dhammaan dhacdooyinka gobolka ee UNWTO ee daafaha dunida, iyo dadaallada kale ee muhiimka ah.
Wasiirku wuxuu ku guulaystay inuu noqdo VIP -da Dalxiiska ugu muhiimsan adduunka, iyadoo dalkiisu diyaar u yahay inuu ku bixiyo balaayiin doolar si uu u caawiyo warshadaha dalxiiska ee caalamka. Sacuudi Carabiya waxay si gaar ah isha ugu haysay dalal badan oo adduunka soo koraya ah si ay uga caawiso maareynta warshadaha dalxiiska ee dhaqaalahan oo kale oo dhex maraya masiibada.
Isla mar ahaantaana, UNWTO waxaa loo arkaa inay tahay mid aan si weyn waxtar u lahayn marka la eego kuwa daciifka ah qaarkoodna waxay leeyihiin hoggaan is khilaafsan. Doorashada Xoghayaha Guud ee hadda ayaa laba Xoghaye Guud oo hore u arkeen mid khaldan oo aan waxba ka jirin.